सगरमाथा साकोसको १७ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न – Nijgadh Fast Track News, Airport News and Latest News of Nijgadh Bara Parsa Rauthat & Middle Terai Region of Nepal::: Nijgadh.com Nijgadh Samachar Bara First online News
२०७३, ९ आश्विन आईतवार १५:५३ September 25, 2016 Nijgadh.com Comments
सगरमाथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड निजगढ ७ को १७ औं वार्षिक साधारण सभा बिहिबार सम्पन्न भएको छ ।
बिहिबार आयोजित सभाको नेपाल बचत तथा ऋण केन्रिुय संघ (नेफ्स्कुन) का संचालक डा. कृष्ण पौडेलले पानसमा बत्ति बालेर उद्घाटन गरेका छन् । सभाको उद्घाटन गर्दै डा. पौडेलले सहकारीको गुणात्मक विकासको लागि सहकारीहरुको एकिरकणको आवश्यकता , उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिनु पर्ने जस्ता बिचारहरु राखेका थिए ।
कार्यक्रममा निजगढ महिका साकोसकी अध्यक्ष लिला खनाल, गौरीशंकर उच्च माध्यमिक विद्यालय निजगढ ८ का प्रार्चाय सुदर्शन प्रसाद कोईराला, लोकप्रिय साकोसका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद चौलागाई, सहकारी बैंक सिमराका प्रवन्धक गोविन्द ओझा, बारा बचत तथा ऋण सहकारी सघं सिमराका उपाध्यक्ष शम्भु राम, बारा उद्योग वाणिज्य संघ निजगढ शाखाका सदस्य पूर्णबहादुर विश्वकर्मा, ईलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रहरी निरीक्षक शुभाष कुमार गैरे, डिभिजन सहकारी कार्यालय कलैया बाराका प्रमुख कुलोत्तम पोखरेल,लगायले शुभकामना मन्तब्य ब्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न सहकारी संस्था, विद्यालयका प्रअ, राजनीतिक दलका प्रमुख लगायत स्थानियको उपस्थिति रहेको कार्यक्रमको अध्यक्षता संस्थाका अध्यक्ष भोला प्रसाद गौतमले गरेका थिए । गौतमले नितिहरु बनाउनु औचित्य आजको वचतको आवश्यकता, संस्थाले गरेको विविध क्रियाकलापहरुको बारेमा सान्र्दिभक बिचारहरु राखेका थिए ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य संस्था सन्चालक सदस्य दुर्गा कोईरालाले गरेका थिए भने कार्यक्रम संचालन बोधप्रसाद चौलागाईले गरेका थिए । कार्यक्रममा संस्थाले विभिन्न शिर्षकमा आफ्ना सदस्यलाई र सहयोगी वित्तिय संस्थाहरुलाई कदर पत्र सहित सम्मान गरेको थियो । संस्थाले आ.व.७२ ÷७३मा ८ करोड भन्दा बढिको कारोबार गरेको थियो भने ७३ ÷७४मा १० करोड भन्दा बढिको कारोबार गर्ने बताउछन संस्थाका अध्यक्ष भोला प्रसाद गौतम ।
साधारण सभा निजगढ ८ स्थित प्रणामी मन्दिरको सभाहलमा भएको थियो ।
२०७२, ३ चैत्र बुधबार १२:३८ July 31, 2016 Nijgadh.com
२०७३, ४ आश्विन मंगलवार १४:४९ September 20, 2016 Nijgadh.com